Difaaca - Wadar Power Technology (UK) CO, LTD..
Awood ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo waa muhiim in la damaanad qaado in ergooyinka Difaaca dhammaadaan sida si guul badan ee suurtogalka ah; is haysta, transportable, low-dayactirka nooc matoor siiya kartaa awood joogto ah oo degdeg ah ama waxaa looga baahan yahay.
Wadar Power waxay bixisaa xal awood si ay u buuxiyaan shuruudaha farsamo ee hay'adaha caalamiga ah, nooc matoor siiya awoodda inuu ku soo shirtago isbitaalada iyo nidaamyada computer on xeryaha milatariga iyo Amarka iyo gaadiidka isgaarsiinta.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee codsiyada military waa ay awoodaan in ay bixiyaan matoorrada dual-noqnoqoshada in shaqeyn karaan labada 50 iyo 60 Hz. Wadar Power sidoo kale ballan qaadayaa xal .Wadashaqayntaas mashaariicda u baahan in dhowr matoor oo dhigaya in lagugu xiro in isku midka ah.